एक महान ऋषि, जसले छोरालाई आदेश दिई काट्न लगाए आफ्न्नै श्रीमतीको टाउँको ! – Todays Nepal
एक महान ऋषि, जसले छोरालाई आदेश दिई काट्न लगाए आफ्न्नै श्रीमतीको टाउँको !
प्राचिन कालमा कयौ ऋषि थिए जसले कठोर तपस्या गरेर देवी-देवताहरुलाई प्रसन्न गरी चाहेको वरदान प्राप्त गरे। यस्तै एक ऋषि हुन् जमदग्नि।
जमदग्रि ठुलो तपस्वी ऋषि थिए। आफ्नो तपस्याको बलमा उनले सुर्यबाट वाणीको सामर्थ्य बढाउने विद्या प्राप्त गरेका थिए। गंगाको किनारमा कठोर तपस्या गरेर देवराज इन्द्रलाई प्रसन्न गरे र उनीबाट कामधेनु प्राप्त गरेका थिए। जमदग्नि ऋषिको जम्मा पाँच छोरा थिए जसमा परशुराम उनको निकै प्रिय थिए। किनभने परशुरामले उनको कहिले अवज्ञा गरेनन्।
क्रोधी स्वभावका थिए जमदग्नि
जमदग्रि एकदमै क्रोधी स्वभावका थिए । उनले आफ्नी श्रीमतीको आचरणबाट क्रोधित भएर उनको टाउँको छोरा पशुरामलाई काट्नलगाई मारेका थिए। यस प्रसंगपछि परशुरामले आफ्नो बुद्धिकौशलबाट सबैलाई पुन: जीवित गरेका थिए। त्यसपछि उनले आफ्नो तपबाट क्रोधलाई जिते र कहिले क्रोध आउन दिएनन्।
भृगुकुलमा भएको थियो जन्म
जमदग्रि ऋषिको जन्म भृगुकुलमा भएको थियो। उनका बाबु महर्षि ऋचीक र माता सत्यवती थिए । जमदग्निको श्रीमतीको नाम रेणु थियो। जसमा उनको पाँच पुत्र – रुमण्वत्, सुषेण, वसुमत्, विश्वासु र परशुराम थिए।
सूर्यदेव पनि आएका थिए उनको शरणमा
एक प्रसंगको अनुसार एकपटक ऋषिले बाण छोड़कर लिनको लागि श्रीमती रेणुलाई पठाएका थिए। त्यस समय चर्को घाम थियो जसका कारण उनी बाटो मै थकित भईन। रेणुकाले एक वृक्षमुनि केहि समय आराम गरिन जसका कारण उनलाई अवेर भएको थियो। रेणुकाले जमदग्निलाई सारा कुरा बताईन। त्यस पछि जमदग्रि रिसले चुर भएका थिए।
क्रोधित जमदग्नि बाणबाट सूर्यलाई छेड्नको लागि तयार थिए तर सुर्य उनको शरणमा आएका थिए। जसका कारण ऋषिको क्रोध शान्त भएको थियो। सूर्यले ऋषि जमदग्निलाई छाता र चरण पादुका भेट स्वरूप दिएका थिए।
राजा कार्तवीर्य जबदस्तीले गएका थिए कामधेनु
जमदग्रिले इंद्रको तपस्या गरी कामधेनुलाई प्राप्त गरेका थिए। एक दिन हैहय देशका राजा कार्तवीर्य सहस्रबाहु अर्जुन उनको आश्रम गएका थिए। जमदग्रिले कामधेनुको मद्दतबाट उनको स्वागत-सत्कार गरे। कार्तवीर्यलाई कामधेनु निकै रुचाएका थिए।
राजाले ऋषिसँग कामधेनु मागे तर उनले मानेनन्। त्यसपछि कार्तवीर्य कामधेनुलाई जबरदस्ती लगे। जब परशुरामलाई यो कुरा थाहाँभयो उनले कार्तवीर्यको वध गरे र कामधेनुलाई पुन:आफ्नो साथमा ल्याए।
राजा कार्तवीर्यको छोराले बदला लिनको लागि जमदग्रिलाई २१ बाण हानेर घायल बनाए जसले उनको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि परशुरामले २१ पटक क्षेत्रिलाई पराजित गरी बदला लिएका थिए।
कुँचो वा झाडुलाई यसरी प्रयोग गर्नुहोस हुनेछ धनको वर्षा, लक्ष्मी माता रहनेछिन प्रसन्न
अविवाहित महिलाको संख्या बढेपछि दुई श्रीमती बिहे गर्न छुट